Shantaan Qodob Si Fiican Uga Fikir Ka Hor Intaadan Guursan - Daryeel Magazine
Shantaan Qodob Si Fiican Uga Fikir Ka Hor Intaadan Guursan
Udiyaar garowga Guurku waa arin aad u dhib badan fikir badana galiya labada dhinac ee guur doonka ah, oo waa iskugu mid Ragg iyo dumarka doonaya in ay guursadaan waana mid ay culayska saaran labada dhinacba iyaga oo fikir dheeraad galiya, ruux kastaan waxa uu doonayaa in guurkiisu noqdo aasaaska runta ah ee nolishiisa danbe. Dhab ahaantii waxa muhiim ah in arimahan aan soo sheegnay ay lagamamaarmaan yihiin isal markaana ay u baahan yihiin in daymo gaar ah loo yeesho. Arimahaan hoos ay daryeelmagazine.com ku xusayso ayaa laga Doonaya Guurdoonka ka hor inta in uu qofka guur doonkii naaqisho oo ku talogal kooda la yimaado.
1- MAS`UULIYAD: Go`aanka Guurka waa go’aansiga aayaha Danbe Saameeya waxana lagama maarmaan ah in ay labada isguursanaysa Dareemaan mas`uuliyada ka dhalanaysa, mana aha in xiliga shukaanisga labada qof isku cusub yihiin ay tusaale u tahay in xidhiidhka wanaagsanaan doono ee guurka ka dib, waana in laada qof ay dareemaan ma`uuliyad ee aanay xiisaha hore ku go’aan qaadan.
2- XORIYADA IS DOORASHADA: Waxaa muhiim ah in labada qof ee nolosha wadaagaya ay ahaadaan kuwo isdoortay kuma haboona in lasoo kala dhaxgalaa xitaa hadii ay yihiin kuwa ugu dhaaw qaraabada , maxaa yeelay cida ladoonayo in ay wada dhaqantaa ee midhaha jacaylka wadaagaan waa lamaanaha cusub.
3- U DIYAAR GAROWGA NOLOL BADALASHADA: Hadii ay lamaanuhu isguursadaan waxa badalmaya qeybo farabadan oo ka mida noloshii hore ee ay ku noolaayeen guurkuna wax sahlan waayo waxa ku jiro xaalada kala duwan oo cusub waana in aad diyaar u tahay in ay dhacaan mudada guurka dareemo kala ah cadho farxad mahan iyo wixii la halmaala.
4- ISkU CADAYN NAFTAADA AH: Waxa laga maarmaan ah in dhalinyarada doonaysa in ay guusadaan ay naftooda si kali ah miisaan u saaraan una tijaabiyaan dareenka ku aadan cida uu doonayo in uu nolosha lawadaago si guudna u eegaa, ka dibna ugu danbayna uu ku qancaa ama ay ku qanacdaa qofka dhaqankiisa iyo hab nololeedkiisa.
5- LAQABSIGA LAMAANAHA CUSUB: Guurku maaha sida dowlad la dhisayo oo kale markaa Ninku waa madaxweynaha Guriga waxana looga baahan yahay in uu fahan san yahay shaqsiyada xaaskiisa haweenayduna sidoo kale waa in ay la socotaa Saygeeda, hadii aad ka doodeen ceebahiina Guurka ka hor waxaa hubaal ah in aad xal buuxa ka gaadheen isqancinta nolosha danbana waxa ay noqonaysaa mid kalgacayl uu ka buuxo oo nolol dhab ah wadaaga.
Weydii Naftaada Ka Hor Intaadan Dooran Waxa Aad Doonayso Inaad Barato 7 Arrimood Oo Mudan Inay Gabadhu Iska Hubiso Ka Hor Go’aanka Guurka Arrimo Gabadha la Gudboon ka Hor Go’aanka Guurka 9 Tallaabo Oo Aad Uga Takhalusi Karto Daciifnimada